Ifama yaseKnoxberry, indlu yasefama eselunxwemeni yaseBerry enombono
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguKirsten
Umgama omfutshane ukusuka kwilali edlamkileyo yaseBerry, kwiindledlana zasemaphandleni, ezithe ngcu emva kocingo olumhlophe yiFama yaseKnoxberry. Le ndlu yasefama eselunxwemeni inokwamkela iindwendwe ezi-4. Ngeembono eziphefumlayo phezu kweepaddokhi zobisi eziluhlaza ukuya kwindawo enqabileyo, uya kukhululeka kwimizuzu nje yokufika. I-cottage inamagumbi okulala angama-2 amakhulu, iibhedi zeKumkani zinokwahlulwa zibe zii-4King Singles xa ziceliwe. I-6.4 km drive (4mins) ukuya elunxwemeni, 1.7 km ngeenyawo ezimcaba ukuya edolophini. Indawo egqibeleleyo yokuphumla kumoya omtsha welizwe.
Indlu yefama eseluNxwemeni yenzelwe injongo, enamagumbi okulala ama-2 King (3mx 3.5m), iifeni zesilingi, i-air-conditioning ebuyela umva (ehlotyeni) kunye nokufudumeza (Ebusika) igumbi lokuhlambela elineendlela ezi-3 ezintsha ezibandakanya iVanity, Indlu yangasese neMvula + Ishawari ebanjwe ngesandla, iKitchenette entsha enomatshini weDelonghi Espresso ohambelana neepod ezininzi, idishwasher, ifriji, isikhenkcezisi, iConvection microwave, BBQ, induction portable cooktop, Sandwich press, Toaster, Electric kettle. Nceda uqaphele ukuba ikhitshi alinayo i-oveni.
I-Wifi kunye ne-Smart TV (zisa ukungena kwakho kwiikhowudi kwaye ukhuphele i-app ukuba ayikabikho).
Iibhedi zodidi lwehotele, iitawuli zelinen kunye neBhafu, iitawuli zaseCabana Beach (zifumaneka ngeHlobo)
Ubusika - iidoona zoboya
Ehlotyeni - I-doona ephakathi
Iingubo ezongezelelweyo zikhona kwiingxowa zengubo. Zonke iindwendwe ziye zabika ukuba i-cottage ifudumele kwaye ikhululekile.
Idesika yethu egqunywe ngokugqithisileyo ngomlilo wasePotbelly (isilumkiso: isiphatho siya kutshisa xa sisetyenziswa- nceda usebenzise iglavu kunye nehuku ukuphakamisa isiciko) kwaye i-BBQ ifanelekile ukuhlala kwaye ujabulele umbono.
Kukho indawo yokucima umlilo ekhoyo ukuba isetyenziswe. Sebenzisa ingqiqo kwaye ukuba umoya uyaphakama nceda ucime indawo yokucima umlilo.
(***Nceda uqaphele ukuba ixesha lomlilo wamatyholo liqala ngomhla woku-1 kuOkthobha liphele nge-1 ka-Epreli. Ngexesha lomlilo wamatyholo yonke imililo yangaphandle iyavalwa ngaphandle kokuba wenze isicelo semvume)
Sinikezela ngee-coil mosquito kunye ne-spray, kuyacetyiswa ukuba ugcine izikrini zivaliwe ukukhusela iibhugi ekungeneni kwi-cottage.
Sifake iBistro blinds zomoya okanye imvula kumgangatho. Nceda uqinisekise ukuba uzibeke phantsi ngqo emgangathweni kwaye uzip kunye ukuqinisekisa ukuba umgangatho uhlala womile.
Kukho itafile enkulu yokutyela yangaphandle kunye netafile encinci yokutyela yangaphakathi enezitulo ezi-4.
Ibhodi yoku-ayina, i-iron kunye ne-air dry rack ibonelelwe ukuba ibe lula kuwe. I-PETS: Siyazamkela izilwanyana zasekhaya kodwa siyakucela ukuba ungavumeli iintsana zakho ezinoboya kwifanitshala okanye iibhedi. ***** Qwalasela iindwendwe ezilandelayo ezinokuthi zibe ne-aleji. Ubungqina beenwele zesilwanyana sasekhaya buya kufuna ixabiso elipheleleyo lempahla yokuthengisa, enokuthi ithathwe kwibhondi yakho.
I-cottage ayinalo ucingo. Uninzi lwabanini bezilwanyana ezifuywayo bazisa ibhokisi yokuhamba okanye basebenzise isikhokelo esinikezelweyo ukubopha inja yabo kwidesika. Unokwenza amalungiselelo kwangaphambili okusetyenziswa kwegadi engaphambili ebiyelweyo esecaleni kwendlwana. Sikwanalo noluhlu lwabahlali bezilwanyana basekhaya ukuba bayafuneka.
Igumbi lokuhlambela- ishampoo, i-conditioner, ukuhlamba umzimba, ukuhlamba izandla kunye ne-lotion, i-makeup wipes, iphepha langasese, isomisi seenwele.
***Ipropathi inenkqubo ye-bioseptic ngoko ke siyakucela ukuba ungabeki nantoni na phantsi kwindlu yangasese ngaphandle kwephepha elinikiweyo. Iingxowa zeenapkeni zibonelelwe ukuba zisetyenziswe kwezococeko kwaye ziluncedo kwinkunkuma yezinja.
Sicoca yonke imiphezulu ngocoselelo ngesibulali ntsholongwane esivunyiweyo se-Covid TGA. Sikwasebenzisa isibulali ntsholongwane senkonzo yokutya ekwibakala.
Zonke izinto zethu zokucoca umoya, ukuhlamba umzimba kunye nesicoci sokuhlamba izitya sithathwe kwaZero co, owenza izikhongozeli ezinokuzaliswa kwiplastiki zisuswe elwandle. Siphinda sizalise ezi zingxobo ngeengxowa ezinokuphinda zisetyenziswe xa zingenanto sizibuyisele ku-Zero co ukuze ziphinde zizaliswe. Smart ! Ngoko ke shiya isitya esingenanto ukuze sihlambe kwaye sizalise kwakhona.
Izilwanyana zasendle sineechidna ehlala kuyo, unokubona iiwallabies, iiKangaroo (ekuseni), imivundla (ebusuku), iiBandicoots, i-echidna, imithwalo yeentaka, amasele emithi ekhalayo, ngamanye amaxesha kudlula ipossum okanye i-wombat, kunye neenkomo zobisi ngaphaya kwendlela. .
Ukuba kukho into oyifunayo nceda ubuze singayifumana.
Ngolwazi lwentlekele yaseShoalhaven nceda uye kwideshibhodi yentlekele yebhunga lesixeko saseShoalhaven efunyenwe kwiwebhusayithi yeBhunga lesiXeko saseShoalhaven
48" HDTV ene-I-Chromecast
IBerry yidolophu enembali edlamkileyo, ephithizela ngeempelaveki ezinde nabatyeleli kule ndawo. Zininzi iiCafes, iindawo zokutyela eziphumelele ibhaso kunye neevenkile ezintle. Indlu yethu ikwi-1.7km ukusuka kumbindi wedolophu, umgama omfutshane (3mins) okanye ukuhamba ngemizuzu engama-20, kunye nendlela yeenyawo uninzi lwendlela. Ukuba ufuna ukuya elunxwemeni, ukuhamba ngemizuzu emi-6 ukwehla kwindlela yaseBeach (6.4km) kuya kukukhokelela kwindawo yokuqubha eSeven Mile Beach. Abasindisi bobomi bafumaneka kwiintloko zaseGerroa naseShoalhaven. Unxweme lwaseGerroa alunabuqhophololo kancinci kuneeNtloko. Thatha ithuba lokuhlola iilali ezikufutshane zaseJindy Andy, eKangaroo Valley okanye eGerringong. Ipaki yabantwana entsha kunye nomkhondo webhayisekile uyakhiwa eBerry kwaye iya kuba yoyikeka! Kukho umkhondo wempompo kunye nepaki kwiintloko zeShoalhaven. I-Nowra Zoo lusuku oluhle kakhulu lwabantwana. IGerroa inolwandle olugadiweyo lokuqubha. Ulwandle lwaseBerry (imizuzu emi-6 ukusuka efama) lulungele ukubheqa kunye nokuhamba kodwa alugadiwe.
Inkonzo yokuhlamba i-$ iyafumaneka ukuze uhlale ixesha elide, sinomphathi ohlala kwindawo, kwindlu eyahlukileyo, kodwa akayi kuphazamisa ubumfihlo bakho. Ukuba ufuna ukunxibelelana nceda wenze. Kukwakho nezinja zokuhlangula ezi-3 kwipropati ezinobuhlobo, kwaye izinja ezimbini ezinkulu zitshixelwe emva kweecingo. Njengoko i-cottage ibekwe kwipropathi yasemaphandleni sinezilwanyana zasendle ezihlala, kuquka i-Echidna, i-Kangaroo, i-Wallaby, i-Possum, i-Bandicoots kunye neentlobo ezininzi zeentaka, siyakucela ukuba ungadli okanye usondele kwizilwanyana zasendle njengoko zonwabile ngokugqibeleleyo kwindawo yazo yendalo. Banike isithuba kwaye baza kuqhubekeka.
Inkonzo yokuhlamba i-$ iyafumaneka ukuze uhlale ixesha elide, sinomphathi ohlala kwindawo, kwindlu eyahlukileyo, kodwa akayi kuphazamisa ubumfihlo bakho. Ukuba ufuna ukunxibelelana…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-1018
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Berry